सिंकारी: एकीकृत गर्नुहोस् र क्रस-फंक्शनल डाटा, स्वचालित वर्कफ्लोज र सबै ठाउँमा वितरित विश्वसनीय इनसाइट्स प्रबन्ध गर्नुहोस्। | Martech Zone
सिंकारी: एकीकृत गर्नुहोस् र क्रस-फंक्शनल डाटा, स्वचालित वर्कफ्लोज र सबै ठाउँमा वितरित विश्वसनीय इनसाइट्स प्रबन्ध गर्नुहोस्।
बिहीबार, मे 13, 2021 बिहीबार, मे 13, 2021 Douglas Karr
कम्पनीहरू डाटामा डुब्दैछन् जुन उनीहरूको सीआरएम, मार्केटि auto स्वचालन, ईआरपी, र अन्य क्लाउड डाटा स्रोतहरूमा जम्मा हुन्छन्। जब महत्त्वपूर्ण अपरेटिंग टोलीहरू कुन डाटाले सत्यलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ भनेर सहमत गर्न सक्दैनन्, प्रदर्शन अवरुद्ध हुन्छ र राजस्व लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ। सिंकारीले काम गर्ने व्यक्तिहरूको लागि जीवन सजिलो बनाउन चाहन्छ मार्केटिंग अप्स, बिक्री अप्स, र राजस्व अप्स जो लगातार आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिको बाटोमा डाटा प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दै।
सिंकारीले एकीकरण, स्वचालन र डाटा व्यवस्थापनको लागि नयाँ दृष्टिकोण लिन्छ। तिनीहरूको पूर्ण डाटा प्लेटफर्म एकता, स्कोर, र तपाईंको सबै शीर्ष प्रणालीहरूबाट डाटा सफा गर्दछ। Workato वा MuleSoft विपरीत, Syncari अपरेसन पेशेवरहरूलाई उनीहरूले विश्वास गरेको डाटाको साथ प्रक्रियाहरू स्वचालित गर्न मद्दत गर्न कोडलेस डाटा प्रबन्धन कार्यहरू प्रदान गर्दछ। डाटा व्यवस्थापन मञ्च प्लेटफर्मले त्यसपछि विश्वसनीय डाटा र अन्तर्दृष्टि वितरण गर्दछ हरेक विभागकोमा सत्यको स्रोत र यी प्रणालीहरू एक अर्कोसँग समन्वयनमा राख्नुहोस् राम्रो डाटा देखा पर्दा। यसले तपाईंको टोलीलाई म्यानुअल डाटा निरीक्षणको बोझबाट र सफा अप केन्द्रित र डाटा संवर्धन, सामान्यीकरण, र डि-डुप्लिकेसनको द्वारा स्वचालित गर्दछ।
Syncari एक उद्यम डाटा स्ट्याक आधुनिकीकरण गर्न उत्तम तरिका हो। अन्ततः टु-अन्त एकीकरणलाई यथार्थपरक सरलीकृत गर्न एक पूर्ण प्लेटफर्ममा फाइभट्रान, डाटा वेयरहाउस (उदाहरण स्नोफ्लेक), र सेन्सस / हाइटौचको क्षमतालाई यसले अद्वितीय रूपमा जोड्दछ। Syncari फ्यूज एकीकरण, स्वचालन, र डाटा प्रबंधन एक पूर्ण प्लेटफार्ममा सबैलाई सक्षम बनाउँदछ डाटालाई पहिलो दृष्टिकोण लिएर यस अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न।
सिंकारी डाटा प्रबन्धन प्लेटफर्म प्रदान गर्दछ:
एकीकृत डाटा मोडेल - हरेक प्रणालीले ग्राहकलाई अलिक फरक तरीकाले वर्णन गर्दछ। हामीले तपाईंको लागि यो सामान्य गर्‍यौं, त्यसैले तपाईंको प्रणाली सबैले समान भाषा बोल्न सक्दछन्।
बहु दिशात्मक सिंक - क्रस-प्रणाली डेटा राख्नुहोस् हाम्रो प्याटेन्ट-पेन्डि transaction लेनदेन ईन्जिनको साथ जो कि प्रत्येक राज्यमा डेटा प्रणाली जडान गर्दछ र स्वचालित रूपमा डेटा मार्दछ।
स्वचालित स्कीमा प्रबंधन - जब नयाँ फिल्डहरू कुनै डाटा स्रोतमा थपिन्छ वा हटाइन्छ, सिंकारीले स्वचालित रूपमा सबै प्रभावित प्रक्रियाहरू अपडेट गर्दछ। अलविदा ब्रेकिंग परिवर्तनहरू!
वितरित डाटा प्रबंधन - सिन्कारीमा सिर्जना गरीएको अटोमेसन र डाटा नीतिले एकीकृत डाटा मोडेलमा जडित प्रत्येक डाटा स्रोतसँग अन्तर्क्रिया गर्दछ, अभूतपूर्व डाटा स्थिरता सक्षम पार्दै।
परम्परागत भन्दा फरक कनेक्टरहरू, Syncari Synapses अन्त प्रणाली स्किमा को गहिराइ बुझ्दछ, मर्ज र सफ्ट-डिलीट जस्तो विशिष्ट अपरेशनहरूको लागि गहिरो एकीकरण प्रदान गर्दछ, र हरेक जडान Synapse भर स्कीमा परिवर्तनको प्रभाव प्रबन्धन। तिनीहरूको एकीकरणको पुस्तकालयमा एयरट्याबल, अमेजन एस,, अमेजन रेडशिफ्ट, एम्जोन किनेसिस, आयाम, ड्राफ्ट, इलोक्वा, इन्टरकॉम, माइक्रोसफ्ट डायनेमिक्स3365, फ्रेशवर्क्स सीआरएम, गेनसाइट, गुगल बिगक्वारी, गुगल शीट्स, हब्स्पट, जीरा, मार्केटो, मिक्सएसएल, नेटसुइट , आउटरीच, सेल्सफोर्स परडोट, पेन्डो, पोष्टग्रेएसक्यूएल, सेल्सफोर्स सीआरएम, सेज इन्टेक्ट, सेल्सलोफ्ट, स्नोफ्लेक, वर्कडे, शून्य, जेन्डेस्क, र जुरो।
सिंकारी डेमो अनुरोध गर्नुहोस्
टैग: अमेजन रेडशिफ्टअमेजन एस।आयामAmzon Kinesisस्वचालनजनगणनाकोडलेसकोडलेस एकीकरणडाटा स्वचालनडेटा एकीकरणडाटा व्यवस्थापनडाटा व्यवस्थापन प्लेटफर्मडाटा गोदामतानेर खसाल्नुड्रग र ड्रप एकीकरणबहावएलोक्वाउद्यमउद्यम डाटाफाइभट्रानफ्रेशवर्क्स सीआरएमलाभगुगल बिगक्वेरीGoogle पानाहरूhightouchहबस्पटएकीकरणintercomJiraडाटा व्यवस्थापन गर्नुहोस्मार्केटोमाइक्रोसफ्ट गतिशीलता 365 XNUMXMixpanelMySQLनेट सूटआउटरीचपेन्डोPostgreSQLसेज इन्टेक्टसेल्सफोर्स सीआरएमबिक्री बल pardotबिक्री लफ्टहिमपातसत्यको स्रोतWORKDAYएक्सेरोजेन्डेस्कजुउरा
हालै: एआई र अवस्थित सामग्रीको प्रयोग गरेर स्वचालित रूपमा सामाजिक मिडिया अपडेटहरू सिर्जना, अनुकूलन र साझेदारी गर्नुहोस्
आउटग्रो: अन्तर्क्रियात्मक सामग्रीको साथ तपाईंको सामग्री मार्केटिंग आरओआई बढाउनुहोस्
मई 13, 2021 मा 3: 03 PM
हामीलाई कभर गर्नुभएकोमा धन्यबाद। यो यति राम्रो लेखिएको छ! धेरै सराहना गरियो र यदि म तपाईंलाई कुनै पनि तरिकाले सहयोग गर्न सक्दछु भने, पुग्न हिचकिचाउनुहोस्।
सबै भन्दा राम्रो,
मई 14, 2021 मा 4: 25 PM
नोटका लागि धन्यबाद, निक! गहिरोमा विभाजित गर्न अगाडि हेर्दै - मैले पहिले नै केहि सहयोगीहरूलाई केही जानकारी पठाएको छु।